Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Sri Lanka » Fizahantany bibidia: Mila tantara maro loko
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Sri Lanka • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ireo mpandray anjara amin'ny varotra fizahan-tany any Sri Lanka dia tokony hamorona tantara maro loko momba ny zava-niainan'ny bibidia any Sri Lanka, fa tsy manolotra zava-misy sy tarehimarika fototra. Ny ilaina dia ny mamorona sy mitantara ny tantaram-biby amin'ny lafiny maha-olombelona.
Rehefa miantso trano fandraisam-bahiny na sampan-draharaha misahana ny fizahantany ny mpizahatany iray mba hanontany momba ny toerana mahasarika ny biby any Sri Lanka, matetika ny mpiasan'ny varotra dia manome lalana fotsiny ary manonona ireo biby azo jerena, fa tsy maneho ny bibidia amin'ny fomba manintona.
Izany dia mitaky ireo matihanina amin'ny fizahantany amin'ny sehatra tsy miankina mba hanana traikefa sy hafanam-po ambony amin'ny zavaboary, ary ny hafatra dia tsy maintsy midina any amin'ireo mpiasa mifandray amin'ny mpizaha tany. Mandritra izany fotoana izany, ny ankamaroan'ny hotely ankehitriny dia manana naturalista amin'ny karamany, ary ny hotely toy izany dia tokony hamporisika azy ireo hamorona tantara ho an'ny mpizaha tany hankafy ny bibidia ao amin'ny faritra.
Nandritra ny taona maro dia nanolotra tantara maro momba ny biby bibidia karismatika aho. Anisan'ny maro hafa, nanoratra betsaka aho tamin'ny:
• Rambo ilay elefanta dia mandehandeha eny amin'ny valan-javaboary Uda Walawe National Park.
• Ilay Walawe Raja nodimandry sady lehibe, mpanjaka tsy iadian-kevitra tao Uda Walawe nandritra ny am-polony taona maro.
• Gemunu, ilay elefanta bibidia masiaka ao amin'ny Valan-javaboarin'i Yala, izay manafika fiara mpitsidika mba hahazoana sakafo.
• Hamu sy Ivan, leoparda lahy matotra, marani-tsaina eny an-dalambe (izay efa maty ankehitriny) ao amin'ny valan-javaboary Yala.
• Natta, leoparda lahy malaza, ary Cleo coy, leoparda vavy matotra, ao amin'ny Valan-javaboarin'i Wilpattu.
• Timothy sy Tabitha, ireo squirrel goavambe 2 semi-tame ao amin'ny Bungalow Seenuggala ao anatin'ny Uda Walawe Park.
Nosoratako ny hetsi-panoherana nataon'izy ireo ary nanangana toetra manodidina azy ireo aho. Ary tsy miala tsiny aho amin'ny "fanomezan-tsiny" azy ireo. Izany no mahatonga azy io ho mahaliana kokoa ny olona. Vao haingana aho no naka ny tantaran'ilay voay nipetraka, Villy tao amin'ny Hotely Jet Wing Vil Uyana, ary nanodina tantara iray manontolo manodidina azy.
Mety manana ny azy i Afrika “Dimy lehibe” biby, fa manana ny biby mampinono “Efatra Lehibe” ihany koa isika – ny trozona manga, ny elefanta, ny leoparda ary ny bera malaina. Ny sasany amin'ireo mpiara-miasa amiko dia miresaka momba ny "Dimy lehibe", manampy ny trozona tsirinaina ao anatin'ity lisitra ity ihany koa, saingy tsy manaiky ny fananana roa mitovy karazana ao anaty lisitra aho.
Sri Lanka dia manana efa ho 30% amin'ny karazana rakotra maitso, zavamaniry 3,000 mahery ary karazana biby 1,000 mahery. Koa azo antoka fa tsy lany ny soa isika fizahan-tany biby fitaovana fampiroboroboana. Dia manontany tena aho raha tena mila mpizahatany marobe tokoa ve i Sri Lanka, sa tokony hanaraka paikady hafa momba ny kalitao fa tsy ny habe?
Sri Lanka dia nandray mpizaha tany 2.3 tapitrisa tamin'ny taona 2018 nahazo vola 4.4 lavitrisa dolara amerikana. 2018 no toe-javatra fototra tsara indrindra, satria tamin'ny taona 2019 dia nisy ny fanafihan'ny mpampihorohoro, ary avy eo dia nisy ny valan'aretina COVID. Ny fizahan-tany bibidia dia sehatra tsy mitsaha-mitombo ary ny Wikipedia dia milaza fa ny fizahan-tany bibidia amin'izao fotoana izao dia mampiasa olona 22 tapitrisa maneran-tany mivantana na ankolaka ary manome mihoatra ny 120 lavitrisa dolara amin'ny harin-karena eran-tany.
Na dia tany Sri Lanka aza, dia nahita fitomboana goavana tamin'ity fizarana ity izahay. Tamin'ny taona 2018 dia efa ho ny 50% amin'ireo mpizahatany rehetra tonga eto amin'ny firenena no nitsidika farafaharatsiny iray amin'ireo valan-javaboary, niakatra 38% tamin'ny taona 2015. Ny Departemantan'ny Fiarovana ny biby dia nahazo Rs 2.1 lavitrisa tamin'ny taona 2018 avy amin'ny varotra tapakila vahiny.
Tsy maintsy tsindriana anefa fa ny indostrian'ny fizahantany dia tsy maintsy miambina ny toerana mahasarika ny biby any Sri Lanka fa tsy miteraka fahapotehana, izay tsy maintsy ho mailo sy ho tompon'andraikitra amin'izany ny sehatra tsy miankina.